Hey Guys, On Tutorial ichi tichataura kukuzivisai nzira yakarurama kuwana Spotify Premium APK yenyu Android Mobile. Kana uri chinotyisa mumhanzi anoda uye zuva rako rinopera mumhanzi, iwe anowedzera chenjera mimhanzi pose iwe kushanda, zvino rugwaro urwu ndechokungoti kwamuri. Music kuchakubatsira kuwana kubva kuora mwoyo uye kuti iwe kugutsikana.
Pane zvinhu zvinoverengeka Apps inokubvumirai chenjera mimhanzi-mutsetse kana varuwane muno mu muchina wako. Sezvo imi mose munoziva, Spotify inocherechedzwa nyaya yakanaka mumhanzi Anwendung Android, Zvisinei hazvina kunze uko mijenya pamusoro dzakawanda Nzvimbo. Dzidza chinyorwa ichi pamusoro Spotify shoma apk Android.
Spotify Premium apk chiri Anwendung kuti anopa iwe kupinda kune digitaalinen mumhanzi uye MAPODCAST, nzvimbo unogona zvichenjererei uye kuwana emamiriyoni nziyo pachena. Anwendung Izvi zvinogona kuchinja shamwari nepaunogona sezvo mureza Anwendung wechipiri kuti hapana.
Spotify Premium apk aigona kutorwa mahara. It anowedzera rinoshanda chero muchina nzvimbo mugowana zvose zvenyu nziyo kufarira uye chenjera kwavari everytime unofanira. On Anwendung ichi, unogona sika Playlist wako kuti waikwanisa kupinda chero nguva, kana newewo unogona kusarudza vamwe Playlists paIndaneti. Iwe tora yakananga kupinda kune Artists uye Albums kuti chenjera.
Kune akawanda package vakaita vakasununguka, kutongwa, shoma uye risingaperi shanduro Anwendung ichi. Lots kwauri kuda zvichenjererei nziyo paInternet kunze kudhanilodha navo, pane yakawanda Apps kwavari, Zvisinei havana mikana yakawanda kana vane adverts vakawandisa, kana ivo haazoregi.
Pane vazhinji Apps kuteerera mimhanzi, Zvisinei hapana achazadzisa iwe pashure maminitsi mashoma. Kuri uri chaiko mumhanzi anoda ipapo unofanira kuedza Spotify Android nokuti zviri yavose sezvavakatarirwa four.5 kubva 5 mukati Google Play Retailer nemazana evanhu.
Plus, Anwendung ichi ane inowanikwa yakajeka uye zvakasiyana zvakanaka zvinhu zvinoita kuvimbwa kuti pahwaro kushandiswa dzose. Vanhu kuwana mufaro kubva Spotify, sezvo unogona kufunga zvimwe Downloads uye critiques.
The Premium Spotify app iri mumhanzi uye mavhidhiyo kumhanyira App nevamwe Additional mikana, zvakafanana Podcast rinobatsirwa, kuti zvinoreva wagadzira zvinogamuchirika nharaunda mumhanzi uye kukupa rakaisvonaka unyanzvi.
Unofanira kushandisa Spotify Premium, uye unogona kuwana zvakanakisisa mumhanzi unyanzvi, uye iwewo unogona kuwana nziyo kubva Assorted siyana Mabhokisi pamusoro Anwendung ichi. Sarudza akarurama zvinoreva kuti anoshandira wekushaiwa enyu uye zvinodiwa.
Simply tinya pamusoro kuwana bhatani kutanga kubudisa kuwana chimwe chete wechipiri uye ipapo kudzidza vakamisa unyanzvi kuti Anwendung ichi. Nechokwadi murege tisangosiya danho kana kuti zvikanganiso.
Kusvika pari zvino Feb 20, 2018
Installs 200,00zero,00razero +
kunoda Android four.1 + (SDK 16)
Content zvinhu Score Rated nokuti 12+
Options - Spotify shoma apk nokuda Android
Kune akawanda zvokusarudza kuti Spotify Premium. Podràs kuridza chero nomuimbirwo chaunoda kuridza cellphone yako. Mukuwedzera, kana iwe zvichaitika kuwana Spotify Premium APK, zvino iwewo unogona kuwana chero nomuimbirwo mahara mahara. On ichi shoma shanduro, iwe angava isina abuda adverts uye zvemarudzi ose spam adverts. Mumwe nzira dziri anowedzera taitaura.
Anwendung Izvi zvachose advert pachena uye iwe gained't kuwana chero pop-kupota kana malware.
Uchawana hune Darika basa yokuti chinyakare Anwendung murege kuwana pamwe kubva adverts.
On Anwendung ichi, vangobvumira vakasimudza tikachirega asingashumbi chengeto. Anwendung Izvi akasununguka kuwana uye unogona kwariri risingaperi mumhanzi mahara.
Iwewo unogona kuwana zvose nziyo cellphone yako vakasununguka pamusoro unhu uye chenjera kwavari everytime chaunoda.
Iwewo unogona sync nziyo dzenyu midziyo kana cellphone yako yakasiyana, piritsi uye kunyange laptop yako. Podràs nehanya dzinoverengeka maredhiyo pachena pamwe kubva kubhadhara chero mari.
Sei munhu anogona Ugadzire Spotify APK pamusoro Android
Zarura wako Mobile kuti Settings, muzviruva, zvakakosha kuti kubvumira kugadzirirwa asingazivikanwi zvinyorwa. Enda ku Settings - chengetedzo - chishambwe Unknown Sources.
Zarura paIndaneti faira nenzira faira foromani kana chete kuzarura faira kubva Downloads kuongorora. Zvadaro tinya pamusoro Gadzirira uye kumirira mumasekonzi mashomanana. Uye uchaona kuti yenyu yakatarwa kukwira kunobatsira.
Zvino kuzarura Anwendung rwamakandida nyore kuisa zvino uye ipapo wotarisa pamwe chete wenyu Spotify nhoroondo. Panguva chiitiko hauna account, ipapo uende yavo yepamutemo Website uye kunyoresa nhoroondo
Zvino kuzarura Anwendung uye wotarisa pamwe chete nokuda kwenyu pose muri nyore nemasaini uye vakagadzirira. Zvino unofanira kushandisa Anwendung iyi cellphone wako hapana nyaya.
Kana kungori zvikanganiso munzira yakarurama tikadzivisa Anwendung ichi, ipapo kungotaura zvepabonde aine US-anazvo VPN. Muenderere zvachose kuwana kukanganisa ichi kuIndia uye mumwe nzvimbo dzakawanda. Podràs kungokonzera kukurira kwedu vachishanda Spotify Premium apk. Zvichida vane zvakanaka Logged mu, unogona kuona smartphone dzenyu dzose nzira yaJehovha Spotify shoma iri nemimwe yenyu. Takaedza minimini ichi, uye zvechokwadi anoshanda zvakanaka kwatiri kubva takaedza, uye zvakadaro anoshanda.
Izvozvo zvose nokuti nhasi, uchidzidza zvose pamusoro Spotify Premium apk nokuda Android. Kune mijenya chikonzero zvakanaka kushandisa Anwendung iyi nenzira Apps siyana. Iwe tora zvizere kupinda vane spam hapana zvemarudzi kusimudzira uye zvakasiyana nyaya. On ichi Mod shanduro Spotify Premium nokuda Android, unogona kuwana MP3 faira pamwe 320 Kbps, iro kufungwa yakanakisisa mumhanzi. Podràs kuti kunyange kuridza mumhanzi uyu pamusoro gudzanzwi, Audio hurongwa kana pamahedhifoni. Kuri ukaona chikanganiso yose vakamisa weboka, Zvinongoreva abve yemashoko. boka redu kuchakubatsira. Mukuwedzera, kana iwe zvichaitika kuona zvichibatsira, udzawo zvose vakaroorana enyu uye vanoda mimhanzi vazvibayire mufaro.
Download shanduro Spotify Music .APK faira
Kuramba weekly: Kurume 12, 2018
File divi: 37MB
Enda Common Posts :
Uputsei Hit APK Download
Vigo Video – kare Hypstar 3.8.1 APK
KokoTime APK Download – Free Entertainment APP nokuda Android
Firefox Browser kutsanya & private APK Download | Best Apps For Mobiles
Microsoft Edge APK Download – Best Apps nokuti Mobiles
MARVEL Avengers Academy 1.0.9 APK- Download Best Apps For Mobiles
Download ichangobva shanduro Cinema Box APK faira – Best Apps For Mobiles
Shiri dzine hasha 2 APK 2.19.1 nokuti Android – Download | Best Apps nokuti Mobiles
Dhiyabhorosi May Mhere 4 Sudurukai Full Android [Apk + dhata] Special Edition